धर्म सन्तान तस्करी, कसरी पुर्‍याइए ६ देशमा १३७ बालबालिका ? « Khabar24Nepal
साउन २८, काठमाडौं । नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको सरकारी अभिलेख छ। ती मुलुकका तथ्यांक जोड्दा त्यही अवधिमा १ सय ५९ नेपाली बालबालिका त्यहाँ धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका छन्। बढी भएका १ सय ३७ जना कसरी गए ? यसले धर्म सन्तानका नाममा नेपालबाट बालबालिका तस्करी भइरहेको पुष्टि हुन्छ।
हराएर भेटिएका बालबालिकाबारे अभिभावकले जानकारी नदिँदा पनि यस्तो तथ्यांक देखिएको बालबालिका खोजतलास केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक मोहनविक्रम दाहालले बताउँछन्। ‘सबै घटनामा यस्तै हुन्छ भन्ने होइन, धेरैजसोमा यही देखिन्छ, हराएका बालबालिका विदेशमा लगिँदैन भन्न पनि सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘खुला सीमाका कारण नेपाली बालबालिका सजिलै भारत जान्छन् अनि फर्किंदैनन्। त्यस्ता धेरैजसो बालबालिका भेटिँदैनन्।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण दैनिकको पहिलो पृष्ठमा आकाश क्षेत्रीले तयार पार्नु भएको हो ।
गजल!”सदैभरी स्वागत गर्छन हाम्रा एकताका हात हरुले”
सुनवल नगर स्तरिय कृषक समुहको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न
भारतले सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कालापानी क्षेत्रमा दोब्बरले बढायो